Qiyaasaha fayraska corona | Fedasil info - informatieplatform voor asielzoekers in België
Qiyaasaha fayraska corona
Ku dhaq gacmahaaga saabuun oo ha taaban dadka kale. Qaabkaas, waxaad yareyneysaa fursada inaad qaadid ama aad qaadsiisid dadka kale fayraska corona.
Fayraska Corona waa cudur aad ula mid ah hergabka. Astaamaha suurtagalka ah waa neef-qabasho, qufac iyo urta ama dhadhanka oo lunta. Inta badan dadka way ka soo kabsadaan fayraska. Dadka waayeelka ah iyo dadka qabo dhibaatooyinka sambabka, wadnaha iyo kelyaha, fayraska wuxuu noqon karaan halis.
Fayraska korona way kala qaadaan dadka. Markii qof qaadsan qufaco ama neefsado, fayraska wuxuu ku faafaa dhinaca dhibcaha yar ee ka imaanayo sanka ama afka. Qof cudurka qaba ayaa sidoo kale ku gudbin kara fayraska gacan taabasho. Fayraska ayaa sidoo kale lagu faafin karaa agabka fadareysan.
Qiyaasaha looga hortago fayraska corona
U jirso masaafo dhan 1.5-mitir dadka kale
Ku dhaq gacmahaaga si joogto ah biyo iyo saabuun
Ku xiro maaskaro gudaha gaadiidka dadweynaha, xarunta qaabilaadda, dukaamada iyo goobaha dadweynaha oo dhan
Haddii aad jirrato, ku nagow guriga/qolkaaga
Xaddid u dhowaanshaha dadka Ka fogow dadka badan
Ka ilaali naftaada iyo dadka kale cudurka Covid-19
Haddii aad ku xanuunsato xarunta qaabilaadda
Wac dhakhtarka, adeegga caafimaadka, adeegahaaga bulshada ama u sheeg qof inuu wargaliyo adeegga caafimaadka
Lama oggola inaad laftaada booqato adeegga caafimaadka ama soo-dhaweynta
Ku sug qolkaaga ilaa dhakhtarka ama kalkaaliyaha ay u yimaadaan inay ku arkaan
Hadduu dhakhtarka ama kalkaaliyaha caafimaadka u maleeyo inaad qabtid cudurka korona fayras, markaa waa inaad ku nagaataa gudaha aagga go'doominta ee xarunta qaabilaadda ilaa inta aad ka bogsanayso (ugu yaraan 7 maalmood).
Adigoo wada joogtaan shaqaale ka socda dawladda ama xarunta soo-dhaweynta waxaad bilaabi doontaat raadraaca xiriirka waxaadna qori doontaa liis dad kuwaasoo aad dhowaan xiriir la sameysay.
Macluumaad dheeraad ah?
Korona Fayras: ilaali naftaada iyo dadka kale Tallaalka fayraska korona Korona Fayras: baaritaan iyo raadinta dadka uu taabtay qof jirran Wareysiga ﻿CGVS/CGRA﻿: tallaabooyinka korona fayraska
Buug-yaraha 'Tallaabooyinka loogu talagalay degganeyaasha aagga go'doominta'
Asturnaanta & afeefta